ပါတနာတစ်ဦး ဖြစ်ချင်ပါသည် – FBS
ပါတနာဒက်ရှ်ဘုတ်ရှိ တိုးတက်မှုတဘ်ကို နားလည်ချင်ပါသည်
လွှဲပြောင်းလင့်ခ်ရှိ အင်ဒီကေတာများနှင့် ကြော်ငြာစာတမ်း စာရင်းများက ဘာတွေလဲ?
ပါတနာကော်မရှင် တွက်ချက်စက် ဘယ်လိုသုံးမလဲ?
FBSနှင့် ပါတနာဖြစ်လာရသည့် အကျိုးကျေးဇူးတွေက ဘာတွေလဲ?
ပါတနာ၏ (IB - မိတ်ဆက်အကျိုးဆောင်) အလုပ်မှာ ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ်လုပ်ချင်သော ဖောက်သည်များကို ဆွဲဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်များဆွဲဆောင်ခြင်းဖြင့်၊ IB တစ်ဦးသည် ၎င်းဖောက်သည်များ၏ အရောင်းအဝယ်အတွက် ကော်မရှင်ရနိုင်ပါသည်။
ပါတနာအကောင့်အလုပ်ဖြစ်စေရန်၊ သင်၏ဖောက်သည်များသည် ငွေထည့်ရန်လိုပြီး၊ အရောင်းအဝယ်အော်ဒါများ ပိတ်ထားရမည်။ ကော်မရှင်သည် ရောင်းဝယ်လိုက်သော အတွဲ၊ lot အရွယ်အစားနှင့် အကောင့်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်။ ၁ lot တွင်ရှိသော ကော်မရှင်နှုန်းထားအား ဤ စာမျက်နှာတွင် (သို့) ပါတနာဧရိယာတွင် တိုက်ရိုက်ရှာနိုင်သည်။
IB ဖြစ်ရတာလွယ်ကူပြီး၊ စတင်ရန် ၃မိနစ်လောက်သာ ကြာပါသည်:
FBSတွင် ဤ လင့်ခ်;မှတဆင့် ပါတနာအကောင့်ဖွင့်ပါ
ပါစင်နယ်ဧရိယာထဲဝင်ကာ၊ သင်၏အထူး လွှဲပြောင်းလင့်ခ်;ရယူပါ။ လွှဲပြောင်းလင့်ခ်ဆိုသည်မှာ ဖောက်သည်များမှတ်ပုံတင်ရန် အထူးကုဒ်ဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်နှိပ်လိုက်သည်နှင့် အချက်အလက်အား ၎င်းတို့၏ဘရောက်ဆာတွင် ရက်၃၀ကြာ သိမ်းဆည်းထားပြီးဖြစ်သည်။ သူ fbs.comကို ပြန်သွားချိန်တိုင်း၊ ဆိုဒ်မှ ၎င်းတို့အား ဖောက်သည်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါမည်;
ခု ဤလင့်ခ်ကို ကြေငြာပြီး၊ သင်တတ်နိုင်သမျှ နေရာများများမှာ ပို့စ်တင်ပါ။ အခမဲ့ပေးထားသော ကြော်ငြာဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို သုံးနိုင်ပါတယ်;
ကြော်ငြာစာတမ်းတစ်ခုစီနှင့် လင့်ခ်တိုင်းတွင် ကြော်ငြာပစ္စည်းများ စာမျက်နှာတွင် ဂရပ်ဖြင့်ဖော်ပြထားသော သီးခြားငွေပြောင်းလဲနှုန်းစာရင်းရှိကြသည်။ စာရင်းအင်းတွင် ဖောက်သည်၏ နှိပ်ချက်အရေအတွက်များ၊ အရောင်းအဝယ်အကောင့်များ၊ သွင်းငွေစုစုပေါင်းပမာဏနှင့် ရွေးချယ်ထားသောအချိန်ကာလ (လ၊ နှစ်) တစ်ခုအတွက် ကော်မရှင်များပါဝင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ၎င်းတို့အား ဒီမှာ:စစ်ပေးပါ
ဖောက်သည်လှုပ်ရှားမှု အပြည့်အစုံအား ပါတနာအကောင့်ဆက်တင်တွင် “စာရင်းအားလုံး” ခလုတ်ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် စောင့်ကြည့်နိုင်သည်: